ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပုံစံပြုအမျိုးမျိုးသောကြွေထည်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ * အားသာချက်များ - ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အဆင်ပြေသောဆောက်လုပ်ရေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သီအိုရီဆိုင်ရာမခံနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည်မန်းဂနိစ်စတီး ၂၆၀၊ ခရိုမီယမ်အကြိမ် ၁၇၀ နှင့်ညီမျှသည်။ အဝတ်အစားအစိတ်အပိုင်းများ၏သက်တမ်းကိုထိရောက်စွာသက်တမ်းရှည်စေနိုင်သည်။ * လျှောက်လွှာTရိယာကိုယူပါ - အသုံးချနယ်မြေများ - စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေနံ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ သံမဏိစက်ရုံများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်အခြားစက်ရုံများသို့ ...
အားသာချက်များသက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အဆင်ပြေသောဆောက်လုပ်ရေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သီအိုရီအရအသုံးခံနိုင်မှုစွမ်းရည်သည်မန်းဂနိစ် ၂၆၀ ကြိမ်၊ ခရုမ်းသံမဏိအကြိမ် ၁၇၀ နှင့်ညီမျှသည်။ အဝတ်အစားအစိတ်အပိုင်းများ၏သက်တမ်းကိုထိရောက်စွာသက်တမ်းရှည်စေနိုင်သည်။
ကြွေထည်အလွန်မာကျောမှုနှင့်သံမဏိမြင့်မားမှုကြောင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပိုက်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများစသည်တို့တွင်အသုံးပြုသောပွန်းပဲ့နိုင်သည့်အပူ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သံမဏိပိုက်များ၊ သွန်းသောကျောက်ပြားများနှင့်သံမဏိ - ပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ထားသောပိုက်များထက်အားသာချက်များရှိသည်။
မြင့်မားသော wear ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
၁။ ကြွေထည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုသည်သံမဏိထက် ၁၀ ဆပိုသည်။
2. အလွန်ထူသော wear -proof အလွှာ။ (အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များအရ wear layer အား ၆mm မှ ၉ မီလီမီတာအထိတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်သည်)
၁။ ဖိအား၏တည်ဆောက်ပုံအကြားကြွေပြားများ၊ အုတ်ကြွပြားများအသုံးပြုခြင်းသည်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖိအားပေးသောပြည်နယ်ဖြစ်သည်။
2. ပတ်ပတ်လည်ပိုက် 4-6 အစိုင်အခဲဝက်အူအပေါက်ရှိသည်, အလယ်ပိုင်းကန်တော့ချွန် - ပုံအပေါက်၏အုပ်ကြွပ်ကိုထိုးဖောက်, သံမဏိပိုက်၏အပြင်ဘက်နံရံနှင့်အတူ welded ။
အရွယ်အစား 1200 (L) * 1000 (W) * 800 ())
ပုံမှန်အထုပ်မှာသစ်သားသေတ္တာ (အရွယ်အစား - L * W * H) ။ ဥရောပနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ပါကသစ်သားသေတ္တာသည်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကွန်တိန်နာသည်ပိုမိုတင်းကျပ်လွန်းပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏အထူးတောင်းဆိုချက်အရထုပ်ပိုးရန်အတွက်၎င်း၊
အရွယ်အစား 1200 (L) * 1000 (W) * 800 (H)
အလေးချိန် .21.2 T
ရှေ့သို့ alumina ကြွေထည်နှင့်သဘာဝရော်ဘာတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ရာဘာကြွေထည်ပစ္စည်းများ
နောက်တစ်ခု: ၉၅% Alumina ကြွေထည်နှင့်သံမဏိပိုက်လိုင်းသည်တရုတ်စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်လုပ်သည်